Welded Metal Inoputira Fekitori | China Welded Metal Inoteedzera Vagadziri, Vatengesi
C50 Series Rotary yakaderera tembiricha bhero zvemaziso chisimbiso
C50 akateedzana zvisimbiso kuDIN24960 / LIK uye GB6556 / LIK zviyero. Inokodzera chero DIN24960 uye GB6556 yakajairwa centrifugal pombi uye yakafanana michina inotenderera shaft chisimbiso.
Iyo yakanakisa ine simba yekuita uye yakawandisa kushandiswa kwezvakatipoteredza kweiyo C50 dzakateedzana chisimbiso zvese zvinobva kune epamberi yakasungwa simbi mvuto. Iyo arch ripple ine kutenderera kweanopfuura 45 ° pamupendero wemukati inoderedza zvakanyanya kushushikana kwepamusoro uye inogumisa kushushikana kwekusimbisa kweiyo yegomba remukati, kuitira kuti kugovera kusagadzikana kuve kwakanyanya uye kusimba kuri nani. Kuchengetedza kuti bhero bhero ine inotevera yakanaka.
C50 akateedzana anogona kuenzaniswa zvinoenderana zvakasiyana zvinoshandiswa zvinoshandiswa, maererano nekuisa chisimbiso zvinotenderwa zvinhu, zvinogona kuchinjiswa kune akasiyana nharaunda zvinodiwa.
Iyo C50 yakateedzana chisimbiso ndeye yakajairwa mvuto chisimbiso ine yakapusa dhizaini uye nyore kuiswa. Inogona kusangana nekuremekedzwa. Oiri yekuchenesa, kemikari, chemakemikari fiber, chikafu, mushonga, thermoelectric uye mamwe maindasitiri akasiyana ezvakasiyana zvinodiwa, anoshandiswa kujekesa nekuchenesa kana zvidimbu zvepakati nepasi viscosity midhiya. Ndiyo sarudzo yakanakisa kugadzirisa zvine chepfu, zvinokanganisa uye mamwe matambudziko.
C65 Series Rotary mhando yakanyanya tembiricha bhero me mechanical chisimbiso
C65 ndeyayo muhombe mvuto akateedzana yepamusoro tembiricha chisimbiso.
Iyo yakanakisa inesimba yekuita uye yakakura yekushambadzira kwezvakatipoteredza yeC65 dzakateedzana chisimbiso inotorwa kubva kumberi yakasungwa simbi mvuto. Iyo arch ripple yemukati wepakati inorerekera kupfuura 45 ° inogona kudzikisira zvakanyanya kushushikana kwepamusoro, kuora kushushikana kwekutemesa kwegomba remukati, uye kudzivirira kukundikana kwekutanga; Uye ita kuti kugoverwa kwekushushikana kuve kwakanyanya, kusimba kuri nani. Kuitira kuti uve nechokwadi chekuti bhero bhero ine yakanaka yekubhadhara uye yekutevera.
C65 akateedzana zvisimbiso zvinoda yakanyoroveswa mvura kana yakaderera kumanikidza hwemhepo uye zvimwe zvinwiwa kunyatso chengetedza tembiricha yechisimba chinoshanda nharaunda. Izvo zvinonyanya kukosha kumatunhu akakwirira ekupisa.
Inokodzera kujekesa svikiro ine yakakwira viscosity, uye bvumira svikiro kuti riine zvimwe zvikukutu zvine simba. Mumamiriro ezvinhu asingasviki 150 ℃, inogona kusangana nekuiswa chisimbiso zvinodiwa zvealkali yakasimba, munyu uye nezvimwe zvinokanganisa media mune kemikari fiber indasitiri.
Inokodzera kujekesa svikiro ine yakakwira viscosity, uye bvumira svikiro kuti riine zvimwe zvikukutu zvine simba. Mumamiriro ezvinhu asingasviki 150 ℃, inogona kusangana nekuiswa chisimbiso zvinodiwa zvealkali yakasimba, munyu uye nezvimwe zvinokanganisa media mune kemikari fiber indasitiri
DBM-B-1 Series Weld simbi mvuto me mechanical zvisimbiso
Inokodzera tembiricha yakakwira yechimakanika chisimbiso, akasiyana masisitimu ekugadzirisa, akasimba mashandiro ekuita mune zvisina kujairika mamiriro ekushanda, static chisimbiso, kubvisa simba re centrifugal pazvinhu zvakasununguka, zvinokodzera kumhanya kushanda zvakanyanya
Kushanda: Centrifugal mapombi ane makamuri makuru ekuisa chisimbiso nemidziyo yakafanana inotenderera.
Kushanda: petrochemical, kemikari, chikafu, mushonga, kurapwa kwemvura, nezvimwe